Elizabeth Perkins – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Ring Two (2005) Unicode The Ring Two ဆိုသညျမှာ ထူးဆနျးသောဗှီဒီယိုကို တဈပတျအတှငျး အခွားတဈယောကျအား လှဲပွောငျးမပေးပါက ကွညျ့မိသူတိုငျး သဆေုံးရကွောငျး ရိုကျထားသော ရုပျရှငျဇာတျလမျးဖွဈသညျ။ ဒီဗှီဒိယိုသညျ စမျမာရာ ဆိုသော ငယျငယျကတညျးက အနှိပျစကျခံရပွီး မိနျးကလေးငယျတဈယောကျ သဆေုံးခွငျးနှငျ့ ဆကျနှယျနသေညျ။ စနျမာရာဝိညာဉျသညျ အိတျဒနျ၏ကိုယျကု ဝငျပူးရနျကွိုးစားခဲ့ညျ။ ရတှေငျးအောကျခွတှေငျ သူမသဆေုံးခဲရသောကွောငျ့ သူမဝိညာဉျ ပျေါလာသောနရောတိုငျး၌ ရတှေေ မွောကျမွားစှာ အရငျထှကျလာတတျသညျ။ ရမြေားသညျ ကွမျးပွငျတှငျ ရှိနရောမှ တဈခါတရံ မကျြနှာကကျြထိ တကျလာတတျသညျ။ ရခေယျြသညျ ထိုမိနျးကလေး သဆေုံးခဲ့သော လယျကှငျးဟောငျးထဲသို့ ရောကျသှားသညျ။ အောကျခွတှေငျ သူမ သမငျဦးခြိုမြားကို တှရေ့သညျ။ သမငျဦးခြိုမြား တဈခုလုံးအပွညျ့ပငျ။ ဒီတော့ သမငျမြားသညျ အိတျဒနျတှငျ ဆနျမာရာဝိညာဉျရှိကွောငျး ရရှိ၍ လကျစားခသြေညျအနနှေငျ့ ကားကို တိုကျခိုကျတာ ဖွဈနိုငျပသေညျ။သို့သျော စမျမာရာသညျ သမငျမုဆိုးမဟုတျပေ အနှိပျစကျခံရပွီး သဆေုံးရသော မိနျးကလေးငယျသာဖွဈသညျ။ ...
Cats & Dogs (2001) ကားလေးကတော့ဖြင့်အထူးတလည်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး…ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ထဲကကြိုက်နှစ်သက်လာတဲ့ ချစ်စရာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပါတဲ့ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်… ကားဟောင်းလေးပေမယ့် ပြန်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀အမှတ်တရကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်… ဒီကားလေးဟာ ကလေးလေးတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားပုံတင်မက လူကြီးများပါနှစ်ခြိုက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ရယ်စရာကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစမှာတော့ ခွေးတွေကိုအမြဲအနိုင်လိုချင်စိတ်တွေရှိနေတဲ့ မစ္စတာတင်ကယ်ဆိုတဲ့ ကြောင်မိစ္ဆာလေး…. သူတို့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အေးဂျင့်အသစ်နေရာမှာအစားထိုးခံလိုက်ရတဲ့ ခွေးကလေး လိုယူတို့..ဘယ်လို ပြိုင်ဆိုင်မှု့တွေနဲ့ချကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဒီကားလေးကိုငယ်ငယ်ကဘာသာပြန်များနဲ့ကြည့်ရှု့ခဲ့ရပေမယ့် စိတ်တိုင်းမကျခဲ့လို အခုတော့ အကောင်းဆုံးမွန်းမံဘာသာပြန်မှု့များနဲ့ ပြန်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျ… ဒီကားလေးရဲ့အားသာချက်တွေကတော့ လူတွေရဲ့ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကို ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာစကားပြောအသံလေးများနဲ့ ပျော်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှု့မယ့်သူများအားလုံးသိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်…. Credit Review
IMDB: 5.1/10 53,179 votes